Caamsaa 06, 2021
Blinken prezidaantii Yukireen Vilaadmir Zleneskiy waliin ta’uu dhaan kyiiv keessatti ennaa dubbatan, Raashiyaan dubbii tuqachuu yoo barbaadde, battala tarkaanfii fudhachuuf dandeettii qabdi jedhan.
Raashiyaan humnoota ishee hanga tokko daangaa Ukireen keessaa ennaa baastu humnoonni hedduun fi meeshaaleen gamasitti hafuu isaanii fi Ameerikaan tarkaanfii maal na dhibdee fi dubbii barbaachaa akka dhaabdu barbaaddi jechuu dhaan ministriin dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Antonii Bliinken har’a beeksisaiiru.
Blinken prezidaantii Yukireen Vilaadmir Zleneskiy waliin ta’uu dhaan kyiiv keessatti ennaa dubbatan, Raashiyaan dubbii tuqachuu yoo barbaadde, battala tarkaanfii fudhachuuf dandeettii qabdi jedhan. Ukireen tarkaanfii tuttuqqaa kana sabatiinsaan ilaaluu ishee nan ajaa’iffadha jedhan Blinken.
Xumura torban darbee Yunaayitid Isteetisii fi angawoonni gameeyyiin gamtaa Awrooppaa akka jedhanitti naannoo daangaa Yukireenii fi Krimiyaa irratti loltoonni Raashiyaa 150,000 walitti qabamuu isaa ibsuu dhaan, bara 20014 ennaa Raashiyaan Kirimiyaa weerarte as lakkoobsa isa guddaa dha jedhan.
Raashiyaan gama isheen humnoonni sun leenjii waraanaa irra turuu isaanii dubbattee, hanga xumura baatii Eblaatti maadhee ofiitti deebi’u jette.
Zelenskiy har’a akka dubbatanitti naannoo daangaa amma iyyuu yaaddootu jira, Yukireen waan akka tasaa uumamu arguu hin feetu jedhan. Blinken akka jedhanitti Yukireen deggersa naga eegumsaa itt dabalaa barbaaddi, gochi Raashiyaa Marii NATO fi kan G7 dhiyeenyaa irratti bal’inaan irratti mari’atameera jedhan.
Itti dabalaniis mariin kamisa har’aa, walii galtee Minsk kan walitti buiinsa Ykireen gama bahaa bakka Raashiyaan adda baatota Raashiyaaf baabsan kanneen naannoo Doonbaas keessa deggeraa turtees of keessaa qaba jedhan. Blinken, Ameerikaan walitti bu’iinsa sana furuuf yaalii diplomaasummaaf mala barbaaduu itti fuftee jirti jedhanii, Raashiyaan garuu mataa jabaachuu itti fuftejedhan.
Ennaa marii isaanii Zleneskiy fi Blinken Yukireen keessatti jijjiirraa dimokraasii fiduuf akkasumas malaammaltummaa Yukireen keessaatti duuluuf yaalii ta’u ilaalchisee mari’ataniiru.
Tokkummaan Mootummootaa Naannoo Tigraay Gargaaruuf Doolaara Miliyoona 65 Gumaache
Naannoon Somaalee Warshaa Oksijiinii Oomishu Hundeesse